Taliyaha AFRICOM iyo Madaxweynaha Jabuuti Oo Kulan wada Qaatay - Awdinle Online
Taliyaha AFRICOM iyo Madaxweynaha Jabuuti Oo Kulan wada Qaatay
Dalka Jabuuti ayaa waxaa booqasho ku tegay Taliyaha Ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaano AFRICOM Jeneral Stephen Townsend, iyagoo halkaas markii uu gaaray siweyn lagu soo dhaweeyay.
Intaas kadib Taliye Jeneral Stephen ayaa Xarunta Madaxtooyadda Jabuuti kulan kula qaatay Madaxweynaha dalkaas Ismaaciil Cumar Geelle iyo Madax kale oo ka tirsan dowladda Jabuuti.
Madaxweyne Geelle iyo Stephen Townsend ayaa ka wada hadlay Arrimo kala duwan oo ay qeyb ka yihiin xoojinta xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada dalka iyo Ciidanka Jabuuti iyo kuwa AFRICOM.
Stephen ayaa waxaa uu sheegay in Jabuuti ay Mareykanka u tahay Isbahaysi muhiim u ah, isagoona uga mahad-celiyay taageerada ay siiyeen Howlgalada loo yaqaano loojistikada ee AFRICOM, xilligii lagu guda-jira ka hortega Cudurka Coronavirus.
Ugu dambeyn Taliyaha Ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ee AFRICOM ayaa bogaadiyay dadaarka Ciidanka Jabuuti ee qeybta ka ah Howlgalka AMISOM ee ku aadan dagaal ka dhan ah Al-shabaab ee ka socda gudaha dalka Soomaaliya.
Previous articleWada hadalada Soomaaliya iyo Somaliland ee Jabuuti ka dhacaya Iyo Wararkii ugu dambeeyay
Next articleAl-Shabaab meel fagaare ah ku toogatay Labo Qof
Guddoomiyaha G/Banaadir oo Eedeyn kulul u jeediyay Ganacsatada Muqdisho
Shir u socdo Farmaajo & Madaxda Dowlad Goboleedyada
Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay geerida Boqorkii Kuwait
Qoor Qoor oo gaaray Muqdisho & Shir ka furmaya